Sida loo sameeyo saamaynta sawirka tallaalka tallaabo tallaabo ah | Abuurista khadka tooska ah
Photoshop waa qalab weyn oo lagu siiyo taabasho farshaxan sawirradaada. Casharkaan waxaan kuugu sheegi doonaa sida loogu bedelo sawirka sawir qalin dhab ah. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo saamaynta sawirka ee Photoshop, ha moogaan qoraalkaan.
1 Fur sawirka oo nuqul ka samee asalka
2 Lakabka desaturate 1 oo abuuro lakabka 2
3 Codso miiraha Gaussia blur
4 Taabashada ugu dambeysa ee qalabka gubashada
Fur sawirka oo nuqul ka samee asalka
Waxa ugu horeeya ee aan sameyn doono ayaa ah fur sawirka aan dooneyno inaan wax ka bedelno Photoshop, waad iska jiidi kartaa feylka oo si otomaatig ah ayuu u furmayaa. Lakabka hoose waa waanu laban laabi doonaaSi tan loo sameeyo, waxaad aadaa tabta "lakabka" ee ku yaal menu-ka kore oo dhagsii "lakabka nuqul". Waxaan koobiga siin doonaa magaca Lakabka 1 ".
Lakabka desaturate 1 oo abuuro lakabka 2
Waxaan u baahanahay Lakabka 1 " madow iyo caddaan noqo Si tan loo sameeyo, xulo, tag tabka "sawirka" ee ku yaal liiska kore, "goobaha" oo guji "desaturate". Hada aan yeelno nuqul "lakabka 1"Waxaan koobiga siin doonaa magaca "lakabka 2". Marka xigta waxaan rogi doonnaa midabada lakabkan cusub, tan nooca amar + xakamaynta io (Mac) + i (Windows). Markaad leedahay sawirka xun, beddel qaabka isku-darka. Waxaad ku sameyn kartaa menuga u muuqda muuqaalka sawirka kore, xulo ikhtiyaarka midabka midabka. Sawirku gabi ahaanba wuu madhnaan doonaa, laakiin ha ka welwelin, aan hagaajino!
Codso miiraha Gaussia blur
On the Lakabka 2 " waxaan codsaneynaa a blur filter. Tag tabta "filter" Liiska kore, guji "Baadho" oo xulo "Gaussian blur". Daaqad yar ayaa ka furi doonta meesha aad karto isbeddel qiyamka radio. Markay sare u kacdo qiimaha aad siiso, heerka ugu sareeya ee faahfaahinta ayuu sawirku yeelan doonaa. Marka Waxaan door bidaa inaan inbadan bidix uga tago, 8, si loo xoojiyo saameynta sawirka qalin.
Taabashada ugu dambeysa ee qalabka gubashada
Wixii aan horey u haysanay waxay u egyihiin sawir, laakiin Aynu horay u sii qaadno si aan natiijada uga sii dhigno mid ka sii wanaagsan. Barta aaladda waxaan ka helaynaa Gub qalab. Liiska xulashada qalabka waxaad ku beddeli kartaa nooca iyo cabirka burushka isla markaana aad ku hagaajin kartaa heerka soo-gaadhista. Waxaan kugula talinayaa inaad dooratid a burush wareega wareega, weyn oo hayn a soo-gaadhista 20 illaa 25%. Hada aan yeelno rinji meelaha gaarka ah ee sawirka, tan waxaan ku heli doonnaa a saamaynta shaandhaynta taas oo hagaajin doonta muuqaalka sawirka. Waxaan rinjiyeeyay meelaha timaha, sanka, indhaha, garka Sideed u aragtaa natiijada ugu dambeysa? Haddii aad rabto inaad sii wadato barashada tabaha si sawirradaadu u siiyaan taabasho farshaxan, waad arki kartaa casharkeenna sida loo adeegsado miirayaasha casriga ah ee Photoshop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo sameeyo saamaynta sawirka ee Photoshop
10ka koorsooyinka Adobe Illustrator ee ugu fiican khadka tooska ah